အားလုံးဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » အားလုံးဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်
Posted by alinsett on Dec 19, 2011 in Arts & Humanities, Myanmar Gazette, Poetry, Short Story | 34 comments
စာအုပ်ကောင်းလေးမို့ညွှန်းပါတယ်။ အလင်းဆက်ညွှန်းတဲ့စာအုပ်
စာအုပ်ကောင်း တစ်အုပ်မို့ ညွှန်းတာပါ။
ဘာသာပြန် စာပေသည် မြန်မာ့ စာပေလောက နှင့် ကမ္ဘာ့ စာပေလောကတို့ ကို ဆက်သွယ်ပေးသော တံတားတစ်စင်း..ဟု
ကန် စာရေးဆ၇ာမ CHIRSTINA SCHWARZ
မူရင်း စာအုပ်အမည် … .. DROWNING RUTH
( CHRISTINA SCHWARZ ၏ ပွဲဦးထွက် လက်ရာ…. ရသ ၀တ္ထုကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်…သက္ကရာဇ် 2000 ၏
အရောင်းရဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာပြန်စာအုပ်အမည် … ဆောင်းညရှိုက်သံ
စာမျက်နှာ 341 မျက်နှာ
စာအုပ်အရွယ်အစား … 14 × 21 ဆိုဒ်
မျက်နှာဖုံး GRAPHIC DESIGN ဖန်တီးသူ….. …. KYAW MINN MOUNG
ထုတ်ဝေခြင်း… ပထမအက်ြမ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ။ 2011 ။
ထုတ်ဝေသည့် စာအုပ်တိုက် … မျက်ပွင့် စာပေတိုက်
စိတ်နေစိတ်ထားနှင့်စရိုက်သဘာဝ ထူးခြားသော အစ်မ ဖြစ်သူ သူနာပြုဆရာမကလေး အေမန်ဒါ…
အေမန်ဒါ ၏ ညီမဖြစ်သူ မက်တီ…
အေမန်ဒါသည် အဓိက ဇာတ်ကောင် ဖြစ်သည်။
မက်တီကမူ အလွဲလွဲအချော်ချော် ပြုမူတတ်သူကလေး။ (သို့ သော် အစ်မ အေမန်ဒါကိုတော့ အသက်ပေးချစ်ခဲ့သူ)
တစ်ဦးကိုတစ်ဦး မြတ်နိုးတွယ်တာကြသော ညီအစ်မနှစ်ဦးအနက်မှ
ညီမ ဖြစ်သူ မက်တီသည် ကားလ် နှင့် အိမ်ထောင်ကျသွားပြီး ရုသ်ဆိုသော
အေမန်ဒါသည် မြို့ပေါ်တွင် သူနာပြုတာဝန် ထမ်းဆောင်ရင်း ကလီမင့်အိုဝင် ဆိုသော အိမ်ထောင်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦး၏ လှည့်စားမှု ကို ခံလိုက်ရသည်။
ရလဒ်မှာ ကလီမင့် တာဝန် မယူနိုင်သော ကိုယ်ဝန်။
ကလီမင့်ကို အမှန်တကယ် ယုံစားပြီး ချစ်ခဲ့မိသော အေမန်ဒါအတွက် ကိုယ်ဝန်ကို အဖေအမည် ဖော်ခွင့်မရခဲ့။
ထို့ ကြောင့် ညီမ မက်တီနှင့် တူမလေး ရုသ်တို့ ကို အဖော်ပြုပြီး…(.ရေခဲ.) ကျွန်းကလေးပေါ်မှ အိမ်ကလေးမှာ..
တိတ်တိတ်ကလေးပုန်း၍ ကလေး မွေးရသည်။
( ထိုအချိန်တွင် မက်တီ့ခင်ပွန်း ကားလ်သည် စစ်မြေပြင်ကိုရောက်နေသည်။)
ထိုကျွန်းကလေးသည် ရေခဲတတ်သော ( ရေခဲများ အရည်ပျော်တတ်သော..) ရေပြင် အလယ်မှာရှိသည်.။
အေမန်ဒါ၏ ကိုယ်ဝန်ကို မွေးဖွားသော ညသည် အေမန်ဒါ၏ ညီမ မက်တီ ရေ နစ် သေ သောညဖြစ်သည်.။
ရုသ်၏ အမေ မက်တီ..ရေနစ်သေ..သွားသော ည ….။
မက်တီ ဘာကြောင့် ရေနစ်..သေ သလဲ..။ ဤသည်မှာ အရေးကြီးသော..လျှို့ ဝှက်ချက် ဖြစ်၏။
အလွန် ရင်နာစရာကောင်းသော..ထို ဆောင်းတစ်ညတွင် .. ညီမ ဖြစ်သူ မက်တီကို ရေခဲ..အရည်ပျော်..ရေများထဲ
အလောင်းကောင်အတိုင်းထားခဲ့ရပြီး… အေမန်ဒါသည်… မွေးကာစ သမီးကလေးနှင့် တူမကလေး ရုသ်တို့ကို
ခေါ်ကာ ပြေးထွက် ခဲ့ရသည်။
ထို ည မှာပင်…. အေမန်ဒါ ၏ ဖခင်မဲ့သော သမိးကလေးကို အေမန်ဒါ၏ မိတ်ဆွေဇနီးမောင်နှံထံ အပ်နှံခဲ့ရသည်။
မွေးကာစ သမီးကလေးကို အေမန်ဒါက အင်မိုဂျင်း….ဟု အမည်ပေးစေခဲ့ပြိး စွန့်လွှတ်ခဲ့ရသည်။
သမီးရင်းကို တစ်ပါးသူ လက်ထဲထည့်ပြိး …ညီမ ဖြစ်သူ၏ သမီး..( တူမလေး ရုသ်) ကို တစ်သက်လုံးစောင့်ရှောက်လာခဲ့တော့သည်။
ရုသ်နှင့် အင်မိုဂျင်း တို့ကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်းများအဖြစ် ပတ်သက်မိသွားသည်။
အင်မိုဂျင်း အပျိုပေါက်စ အရွယ်တွင် ကလီမင့်အိုဝင်မိသားစုထံ၌ လက်နှိပ်စက်စာရေးမလေးအဖြစ် အလုပ်ရ သွားသောအခါ….
သားအဖနှစ်ယောက်၏ ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှုသည် အလွန် နာကျင်စရာကောင်းပါသည်။
အဖေ သည် သမီးကို သမိးမှန်း မသိပဲ……..။ ။
မဖြစ်သင့်တာများ မဖြစ်ရအောင်..အေမန်ဒါက ကြားဝင် လှုပ်ရှားလိုက်သည်မှာ..အသေအကျေ…။
ဇာတ်သိမ်းသည်.. ထူးခြားသော .၊ ထင်မထားသော အလှည့်အပြောင်းများကြောင့် အသက်ရှုဖို့ ပင်.
မေ့သွားစေလောက်အောင် ရ သ မြောက် ပါသည်။ ။
( ဇာတ်လမ်း တင်ပြပုံ )
တင်ပြပုံ အနည်းငယ်မော်ဒန်ဆန်ပါသည်။ အဓိကဇာတ်ကောင်..အေမန်ဒါ ၏နေရာမှ..အတိတ် ဖြစ်စဉ်များကို ဖော်ပြသည်။
ရုသ်..၊ ကားလ် ..စသော..အခြား ဇာတ်ကောင်များနေရာမှ ပစ္စုပ္ပန် ကာလကို တင်ပြသည်။
အတိတ်နှင့် ပစ္စုပ္ပန် ကို တလှည့်စီ တင်ပြသောအခါ…… ဆန်းသစ်သော ရသ ကို ပေးစွမ်းပါသည်။
( မြန်မာ ဘာသာ ပြန်သူ ၏ ဘာသာပြန်ပုံ ထူးခြားချက် )
မြန်မာဘာသာပြန်သူ ၀င့်ပြုံးမြင့် သည်… ဘာသာပြန် စာရေးဆရာမ တစ်ယောက်၏ နေရာ ( ကဏ္ဍ ) ကို
သတိပြုမိအောင် ပညာ ပြ ထားပါသည်။
ဘာသာပြန်သူသည် အနုပညာနှင့် အတတ်ပညာကို စနစ်တကျ..ထုတ်သုံးထားသည် ဟုဝေဖန်ချင်ပါသည်။
ကျစ်လျစ်ပြေပြစ်သော ၊ ထူးခြားဆန်းသစ်သော ဘာသာပြန် ၀ါကျများကို စာမျက်နှာတိုင်းတွင်တွေ့ရသည်။
ထူးခြားသော ဘာသာပြန်ပုံဟု ကျွန်တော်ယူဆထားသော ၀ါကျအချို့ကို ထုတ်နှုတ်ပြချင်ပါသည်။
ထူခြားသော ၀ါကျများမှာ အလွန်များသောကြောင့် အနည်းငယ်သာ တင်ပြပါတော့မည်။
မူရင်းဝါကျ….၁။ WHEN SPRING BLUSTER ITS WAY THROUGH A CHINK IN WINTER , WHEN THE SKY WAS A SOFT BLUE AND WATER
RUSHED THROUGH DITCHES .
မြန်မာပြန်ဝါကျ … ရာသီနွေဦးသည် အချမ်းလ သမယ၏ အက်ရာကလေးထဲမှ ခြိမ်းခြောက် ဟိန်းဟောက်၍ ၀င်ရောက်လာသည်။ ကောင်းကင်သည် ပြာလွင်နုလျက်..။
မူရင်းဝါကျ ၂။ HE WAS GOOD – LOOKING , I’LL GIVE HIM THAT . HE HAD A FINED-BONE BOYISH FACE , AN EASY . SWINGING GAIT
AND BROWN HAIR THAT FELL INTO HIS EYES- THE KIND OF LOOKS A GIRL CAN MAKE A LOT OF , IF SHE’S SO INCLINED .
မြန်မာပြန်ဝါကျ…. ကားလ်သည် ရုပ်ဖြောင့်သည်။ ကားလ်နှင့်ပက်သက်၍ ထိုကိစ္စကိုတော့ ကျွန်မပြောနိုင်သည်။ ကားလ်သည် အရိုးအချင်ပြေပြစ်သည်။
မျက်နှာ နုသည် ။ ကိုယ်ဟန်နွဲ့နွဲ့နှင့် ဆံပင်ညိုများ မျက်လုံးပေါ် ၀ဲနေသည်။ သူ့ ကိုကြွေသော မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနှင့်
အဓိပ္ပါယ်မျိုးစုံ ဖွင့်နိုင်သော ရူပကာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
မူရင်းဝါကျ ၃။ WHILE THE ICE , WHINING AND SIGHING, GAVE UP ITS BED , UNTIL THE BRIGHT MORNING WHEN THE LAKE
WAS ALIVE AND DANCING AGAIN .
မြန်မာပြန် ၀ါကျ… သက်ပြင်းရှိုက်ကာ ညည်းကာ ညူကာ..ရေခဲကမ္ဗလာ၊ ရေခဲလွှာကို ဖယ်ခွာရုတ်သိမ်းပေးလိုက်သော နှင်းယွန်းဂိမှာန် ။
ရေကန်သာသည် တကြော့ပြန် နိုးထလာသည်။ လင်းအာရုဏ်သည် တောက်ပလျက်..။ လှိုင်းကြက်ခွပ်များ..ကြွကြွရွရွ ။
DROWNING RUTH (သို့ မဟုတ် ) ဆောင်းည ရှိုက်သံ သည်
2011 ခုနှစ်အတွင် ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးသော..၊ ခံစား၍ အကောင်းဆုံးသော
ဘာသာပြန်စာအုပ် အဖြစ် ( ကျွန်တော်) သတ်မှတ်ထားပါသည်။
( အလင်းဆက် ၏ ၀န်ခံချက် )
ရသ ၀တ္ထုကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်သော ဆောင်းညရှိုက်သံကို စာချစ်သူများ လေ့လာ ခံစားနိုင်ရန်..ဝေမျှ တင်ပြလိုက်ပါသည်။
စာမျက်နှာ များခြင်း ၊ ဇာတ်အိမ် ကျယ်ခြင်း နှင့့်် ထူးခြားချက်များ များစွာရှိနေခြင်းတို့့ကြောင့် အကျယ်တ၀င့်မပြောသာပါ။ ထို့ ကြောင့် အကျဉ်းချုပ်မျှသာ တင်ပြနိုင်ပါတော့သည်။
စာအုပ်ပုံတွေ..တင်တာ မရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ ပါလိမ့် ။
စာအုပ်ပုံတွေကို တင်ပါသေးတယ် ။ မူ၇င်း စာအုပ် ကိုပါ ပုံ တင်ပါတယ် ။ ဘာလို့ မရလဲ..မသိပါဘူး။
တော်သေးတယ် ။ တင်လို့ ရသွားလို့။
အဲဒီစာအုပ်ကို ရှာကြည့်နေတာ ၂ ခါ ရှိသွားပြီ … မတွေ့သေးဘူး … အညွှန်းကောင်းလွန်းလို့ ဖတ်ကြည့်ချင်လာပြီ …
အင်မိုဂျင်း တို့သားအဖ ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှု ကို ခံစားချင်သေးသည်….
ညည်းဝယ်လိုက် ဖတ်လေ. ….
ညည်းဖတ်ပီးရင် ..အိုင်ခိတို့ နဲ့ ကျုပ်ဆီ ထည့်ပေးလိုက် …ဟီဟိ….
ဖတ်ပြီးရင် ပြန်ပြောပြ …ဟိ
ပြန်ပြောရင်လဲ ဒီကို ဖုန်းခေါ်ပြီး ပြန်ပြောပြ….
လူဂျီးကို အဲ့လို မနောက်ရ၀ူးလေကွယ် ….
ဖုန်းနဲ့ ၀တ္ထုဖတ်ပြရရင် …နာ ဒေ၀ါလီ ခံတွားရမှာပေါ့…
စာအုပ်ဆိုလို့ …စကားမစပ် .. ပင်းဘုတ် ရရင် လိုချင်တယ်ဗျာ..
ရှိတယ်မလား …ပို့ပေးလို့ရလား …??
အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ အခန်းဆက်ရေးပေးဖို့ စဉ်းစားထားပါကြောင်း…
ဒီက နီကီတာက ကီးန်ိမ့်သဖြင့် ပင်းဘုတ်ဟူသော ဝေါဟာရကို နားမလည်ဘာသောကြောင့်
အကယ်၍ ရှိခဲ့ပါက(ပင်းဘုတ်ဆိုသော ဘာမှန်းမသိသောအရာ) လူကြုံလည်းရှိပါက ပို့ပေးပါမည် ဖြစ်ကြောင်း
လိမ္မော်သီး ရေ …
ပင်းဘုတ် ဆိုတာ ဒူးရင်းသီး ကြီးကလေးမတို့ဆီ လာလာပို့ချနေတဲ့ စာအုပ်ပါကွယ်
အဲ့ဒါ .. ကြက်မောက်သီး နုတ်စ်ပြန် ထုတ်ချင်လို့ပါကွယ်…
ဟုတ်ဘီ ၊ ဝယ်ဖတ်ရမယ့် စာရင်းထဲ တို့ လိုက်ဘီ
စာအုပ်တအုပ်ကိုညွန်းပြတဲ့နေရာမှာ ရေးထားတဲ့ စာကို ဘယ်လိုနှစ်သက်ကြောင်း ပြန်ရေးပြတာလေးကို
ရေကန်သသည် တကြော့ပြန် နိုးထလာသည်။ လင်းအာရုဏ်သည် တောက်ပလျက်..။လှိုင်းကြခွပ်များ..ကြွကြွရွရွ ။
မြန်မာစာကိုပါ ချစ်မြတ်နိုးအောင် ရေးတတ်ပါပေ့။
” ကြွရွ” …………..တဲ့။
အလန်းစကားအုပ်စုကို စနစ်ကျစီချယ်၊ သည်နှယ်သီကုံး၊ အလှဆုံးမို့။
အားလုံးကောင်းတော့ အလင်းဆက် ပေ့ါ။
သားအဖ နှစ်ယောက်၏ ပြန်လည် တွေ့ဆုံမှု သည်…အလွန်..နာကျင်စရာကောင်းပါသည်။
အဖေသည်…သမီးကို သမီးမှန်းမသိပဲ……… ………………………….
( သမီးဖြစ်သူ အင်မိုဂျင်းကလည်း အဖေရင်း ဘယ်သူဖြစ်နေမှန်း..မသိခဲ့ပါ။)
ကျေးဇူးပါပဲ..ဆရာသစ်မင်းရေ..။ဆရာ မမန်းသေးလိူု့မျှော်နေတာပါ။ အခု ကျွန်တော် ညွှန်းရကျိုးလေး နပ်ပါပြီ။
သမီးကြီး..ရေ.. စာအုပ်တန်ဖိုးက 2500 ကျပ်ပါ။ မျက်ပွင့်စာအုပ်တိုက်မှာ ၀ယ်ရင် ရနိုင်ပါတယ် ။ စာပေလောက စာအုပ်အရောင်းဆိုင်ကြီးတွေမှာ လည်း ရှိမှာပါ ။
အဲဒီ စာအုပ်ကေ၇ာင်းကောင်းနေတယ်..တဲ့ ။ မန္တလေး ဘက်မှာ ပိုရောင်းရတယ်..တဲ့။
ကျွန်တော် ညွှန်းတာပဲ..ကောင်းလို့ လားမသိ..ဟဲဟဲ.။
အဲဒီ ဘာသာပြန် စာရေးဆရာမ နဲ့ မူရင်း စာရေးဆ၇ာမတို့ တော့ ကျွန်တော့်ကို မုန့် ဝယ်ကျွေးသင့်ပြီ…ထင်တယ်နော်။ မိတ်ဆွေ..တို့ ရော.. ဘယ်လို ထင်လဲ..။
ကိုပေ..ရေ..၀ယ်ဖတ်နော်။ ၀ယ်လို့ မရရင် ကျွန်တော့်ဆီ..လိပ်စာပေးလိုက် ။ ပို့ပေးမယ်။
နီလေး နဲ့ ကိုထွန်းဝင်း..တို့ လည်း ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပါနော်။ ကျွန်တော့် ပို့ စ်ကို အားပေးတဲ့မိတ်ဆွေ..အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ့.။
နီကီတာရေ.. အင်မိုဂျင်းတို့ သားအဖ ပြန် ဆုံ တာကို ကျွန်တော်…ထိထိခိုက်ခိုက်ခံစားလိုက်ရပါတယ် ။ယောကျာ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ပို ခံစားလိုက်ရတာပါ။
ကျွန်တော် အမြန်ဆုံး ပြန်ပြောပြနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ် ။
ဘာသာပြန်စာရေးဆ၇ာမ ရဲ့ ခွင့်ပြု..ချက်ကို လည်း ယူရဦးမယ်။ သူမ ဆီ ဆက်သွယ်နေတာ မရသေးဘူး။ ရမှ သေချာ ခွင့်တောင်းပြီး…တင်ပြပါဦးမယ်။
ကျေးဇူးပါ..အလင်းဆက်.. ……လကုန်ရင်တော့..၀ယ်ဖြစ်အောင်ဝယ်မယ်….ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေ မဖတ်ဖြစ်တာကြာနေပီ………
ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာပြန်စာအုပ်ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းက မျက်ပွင့်စာအုပ်တိုက်မှာ ၀ယ်ခဲ့ တာပါ။
မမရေ..ကျေးဇူးပါပဲ။ မမတို့ ရဲ့ ချီးကျူးစကားလေး ကြားရတော့ ကျွန်တော်..နောက်ရေးမယ့်ပို့ စ်အတွက် အားတွေ ရှိသွားပါပြီ။ ကျွန်တော့်ပို့ စ် မှန်သမျှကို အားပေး ဖတ်ရှု..လာတဲ့ မမတို့ ..ကိုThan Htut Oo တို့ ကို ကျေးဇုးတင်ပါတယ် ။
ဆရာသစ်မင်း တို့ ၊ကိုပေ..တို့ တော့ ရောက်လာပါပြီ..ကျွန်တော့်ပို့ စ်တိုင်းကို အားပေးဖတ်ရှုလာတဲ့ မန်ဒလာသူ..လေး ဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်။
အန်ကယ်ကြီး.ရေ.. ချီးကျုး လို့ ကျေးဇုးပါပဲဗျာ. ကျွန်တော် ညွှန်းရကျိုးလေး နပ်ပါပြီ။
ဆရာ နိဂိမိ ရေ… ကျွန်တော့် ပို့ စ်ကို ၀င်မန်းလို့ ကျေးဇူးတင် ၀မ်းသာရပါတယ် ။
ဆရာ ပြ သွားတဲ့ ဥပမာကြောင့် ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ စာက အရသာ အတော်ရှိမယ်..လို့တွေးမိပါတယ်။
ကျွန်တော် စာပေအနုပညာ နဲ့ ပက်သက်တာတွေ..ပဲ..ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်။
ကြောင်ကြီးရေးတဲ့စာတွေကို အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန် ထုတ်ဝေသူများရှိမယ်ဆိုရင် သဂျီးကို လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်နဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ခန့်ပါတယ်။ ပြင်သစ်၊ စပိန်၊ လက်တင် ရုရှားဘာသာပြန်များအတွက်လည်း သက်ဆိုင်ရာ စာအုပ်တိုက်များနဲ့ ညှိနှိုင်းနေပါပြီ။ ဂျပန်လိုအတွက်တော့ မောင်ဂီနဲ့ ဆြာသစ်နှစ်ယောက် အဝေမတည့်လို့ ဂျပန်အစိုးရကိုယ်တိုင်ပဲ ဘာသာပြန်ပုံနှိပ်ပါလိမ့်မယ်။ ရသမျှကို အိုဒီအေ ရံပုံငွေအတွက်လှူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်လိုတော့ ပေးမထုတ်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ (တစုံတယောက်သောသူက မှားပါတယ်ရှင်လို့ လူသိထင်ကြား မန်းဂေဇက်မှာ တောင်းပန်မှ ပြန်လည်စဉ်းစားပေးပါမယ်၊ ခိုးထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေ၊ သို့သော် ကြောင်ကြီးရဲ့ အသိအမှတ်ပြုကိုတော့ ရမယ်မဟုတ်ကြောင်းပါ)။ နင့်ထက်ပို ကြီးတယ် မမှန်လေးရေ…စိတ် ဆိတ် ဆိတ်….
ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေတော့ ဖတ်ချင်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ခက်ခဲနေတာကတော့ .. သူတို့နာမည်တွေ မှတ်မိဖို့ပါ ..နာမည်တွေက မှတ်ရမလွယ်တော့ .. ဇာတ်ကောင်တွေများလာလျှင် ဘယ်သူက ဘယ်သူလဲလို့ .. အရှေ့ဘက်ကို ပြန်လှန်ဖတ်ရတယ် … ။ မဟုတ်လျှင် ဇာတ်ရည်မလည်ဘူး … ။
ဒေါင်းလော့လုပ်လို့ရမယ့်လင့်လေးရှိလျှင် ရှဲပါဦး .. ၀င်ဖတ်ချင်ပါတယ် … ။
ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာရော ၀တ္တုတွေထဲမှာပါ … သူများနိုင်ငံကလူတွေ သူ့ကလေးကိုယ်မွေး .. ကိုယ့်ကလေးသူများပေးတဲ့ အကျင့်တွေရှိနေကြတာတွေ့ရတယ်နော် … ဒါ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ပဲလား ..။
ဒီလကုန်လို့ စာအုပ်ဆိုင်သွားရင် အလင်းဆက် ညွှန်းတဲ့ စာအုပ်လေးတွေပါ
သူကြီး.ရေ…အခုပဲ..ပြင်လိုက်ပါတယ် ။ စကားလုံးကို နညိးနိုင်သမျှ နည်းအောင် လုပ်လိုပ်ပါတယ် ။
ပုံတေါ ကိုတော့ နောက်မှ တင်ပါတော့မယ် ။
သူကြီးဆီ ကိုတော့ စာအုပ် မျက်နှာဖုံး ပုံတွေ ပို့ လိုက်ပါပြီ။
ကိုအလင်းဆက်ရေ အားအင်တွေနဲ့ ခရီးဆက်လို့ ရတာပေါ့ဗျာ။
ဦးခိုင်ရဲ့ အားပေးမှု အားဆေးနဲ့ ပိုမိုကောင်းသော စာများ ရေး နိုင်ပါစေခင်ဗျာ။
with Merry X’Mas
စာအုပ် မျက်ပွင့်စာအုပ်တိုက်မှာ ၀ယ်လို့ ရပါတယ် ။ အဲဒီ စာအုပ်က အရမ်းရောင်းရနေတယ် ။
ကျွန်တော် အညွှန်းကောင်းလို့ ပဲ..ဖြစ်မယ် နော် ။
ကျွန်တော့် ပို့ စ်ကို စာအုပ် ရော… အညွှန်း ကိုပါ အသ်ိအမှတ် ပြု..ကြလို့ ကေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ဆရာ သစ်မင်းရေ..။ ဦးခိုင် ရဲ့ဂုဏ်ပြု ခြင်းက ကျွန်တော့်ကို အတော်လေး အားတွေ ဖြစ်လာစေပါတယ် ။
ကျွန်တော် အရမ်းဝမ်းသာပါတယ် ။
ကျွန်တော် ဦးခိုင်ဆီ ကို ပို့ လိုက်တဲ့ဆောင်းပါးလေးကို ဒီ ဆောင်းပါး ထက် ပို သန့်အောင် ပြင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
အားလုံးကို လေးစားစွာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။